Daawo: MUSTAFE CAGJAR: "Carada FARMAAJO loo qabo yaan ABIY lagula dhicin" - Caasimada Online
Home Warar Daawo: MUSTAFE CAGJAR: “Carada FARMAAJO loo qabo yaan ABIY lagula dhicin”
Djbouti (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Mustafe Muxumed Cumar Cagjar oo dalka Jabuuti uga qeyb galay Shirka Madasha Aragti-Wadaagga ee Machadka Heritage ayaa si qota dheer uga hadlay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya.
“Hadda waxaa la dilaa ciidankeena Liyuu Boolis, laakiin ma dhacdo inay fal-celin sameeyaan oo dadka laayaan, sababtoo ah talo Soomaaliyeed ayaa deegaanka ka jirta, sidaas darteed waxaan aaminsanahay in Dr. Abiy go’aanka uu ka qaatay Soomaaliya uu ku saxan yahay,” ayuu yiri Madaxweyne Cagjar.
Waxa uu sheegay in kalsooni badan uu ku qabo in Abiy uu la macaamili doono Madaxweynihii ay Soomaaliya doorato oo bedela Farmaajo, “Marka carooyinka gudaha ah ee Farmaajo loo qabo, Abiy in loogu caroodo waa wax laga haboon yahay,” ayuu yiri.
Sidoo kale Madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in ka dowlad deegaan ahaan ay heystaan xorriyad dhameystiran, isla markaana ay hadda si xor ah isku soo doortaan.
“Soomaalida gobolka markii aan eegno, waxaba nama yeelin Abiy anaga, hadii ay jiraan dad siyaasad u xiran, anagaa iska xirnay, ceebteedana anagaa leh, laakiin waa u madax-banaanahay sayaasadeena, waxaan heysanaa xorriyad aan caadi aheyn, waligeed ma dhicin in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo deegaanka Soomaalida sanadahaan ka hor,” ayuu yiri Mustafe Cahjar.
Ugu Dambeyntii waxa uu sheegay in Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu la dagaalamayo oo ku sii jeedo kooxda TPLF oo Soomaalida duleyneysay 27 sano oo xariir ah.